फिल्मका लागि काम दिलाइदिन्छु भन्दै सेक्सको प्रस्ताव राख्नेहरुको संख्या पनि उस्तै रहेको छ । केही बलिउड अभिनेत्रीहरुको बालअवस्था निकै दुखद रहेको छ ।
उनीहरु चायल्ड अब्युजको शिकार भएका छन् । उनीहरु आफ्नै नजिकका नातेदारहरुबाट शारिरीक तथा मानसिक रुपमा शोषणमा परेका छन् ।
केही अभिनेत्रीहरु त शिक्षकहरुबाट यौन शोषणमा परेका छन् । केही अभिनेत्रीलाई त शोषण भनेको के हो समेत थाहा नहुने अवस्थामा समेत यस्तो दर्दनाक अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् ।
१. सोम अली
पाकिस्तानमा जन्मिएकी यी भारतीय अभिनेत्रीको एक समयमा सलमान खानसँग सम्बन्ध रहेको भन्दै ठुलो चर्चा भएको थियो । तर उनी बाल अवस्थामा रहँदा निकै एक व्यक्तिको घिनलाग्दो कार्यबाट गुज्रिएकी छिन् । यो कुरा सोमीले अमेरिकाको एक विश्वविद्यालयमा बताएकी थिइन् । त्यो घटना अझै पनि उनी भुल्न सकिरहेकी छैनन् ।
२. कल्कि कोचिन
उत्कृष्ट अभिनयका कारण चर्चामा रहने कल्कि बलिउडमा उनको स्थान महत्वपुर्णका साथ हेर्ने गरिन्छ । उनले एक अन्तर्वार्तामा भनेकी थिइन्,‘ म सानो छदाँ मेरो रेप भएको थियो । म यो कुरा भुल्न खोज्छु तर सकिरहेको छैन । तर्साइरहेको छ ।’
३. सोफिया हायत
बलिउडमा हट एण्ड सेक्सी अभिनेत्रीको रुपमा परिचीत मानिने सोफिया हायातले एक अन्तर्वार्तामा आफु बलात्कार भएको रहस्य खोलेकी थिइन् । उनको बाल्यकाल निकै दर्दनाक रहेको बताएकी थिइन् । सोफियाको घरमा आउने एक अंकलले उनलाई सेक्स अब्युज गरेको थिए । उनी डिप्रेशनमा पनि गएकी थिइन् ।
४. अनुष्का शंकर
सितार बादक रबिशंकरकी छोरी तथा स्वयम पनि सितार बादक रहेकी अनुष्का शंकर समेत यौन शोषणको शिकार भएकी थिइन् । अनुष्काले दिएको जानकारी अनुसार उनको एक परिवारको एक साथीले उनको बारम्बार सेक्स अब्युज गरेका थिए । त्यो घटना सम्झिदा पनि उनी डरले काम्ने गर्छिन् ।
५. निकिता गोखले
कक्षा ११ मा पढ्दा निकितालाई उनकै शिक्षकले बारम्बार मानसिक तथा यौन शोषण गरेको थिए । हट एण्ड सेक्सी मोडल तथा अभिनेत्रीमा परिचीत निकिताले शिक्षकको त्यो व्यवहारले हालसम्म पनि पिछा नछोडेको बताउँछिन् ।